International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက အတည်ပြုပြဌာန်း ခဲ့သောနေ့သည် ယနေ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် နှစ်ပေါင်း (၆၇) နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း၏ အခြေခံမူဝါဒများက လူသားများသည် မွေးရာပါဖြစ်သည့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအတိုင်းလိုအပ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ခွဲခြားခြင်း မရှိဘဲ လူတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိကြောင်း တိတိကျကျဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ဆောင်ပုဒ်သည် "Our Rights, our freedoms, Always!" အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ ထာဝရအတွက်ပါ" ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ပုဒ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံမူဝါဒ များနှင့် အထူးကိုက်ညီလှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်မှန်ပြည့်ဝသည့် လူ့အခွင့်အရေးကို ရရှိခံစား နိုင်ရန်အတွက် လူသားတိုင်းသည် အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်မှုများကို ဟန်ချက်ညီညီ ရရှိ ခံစားနိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခွင့်အရေးများရရှိပြီး လွတ်လပ်မှုမရှိလျှင် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိသည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ထို့အတူ လွတ်လပ်မှုရှိသော်လည်း အခွင့်အရေးမရှိပါက ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ဘ၀ကို ဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
လွတ်လပ်မှု (Freedoms) ဆိုသည်မှာ မတရားမှုအပေါ် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးခြင်း (Freedom from Fear) ဖြစ်သည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ရန်အတွက် လူသားတိုင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့လိုသလို ထိုသို့ လုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရက ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကိုယ်တိုင်မချိုးဖောက်ဘဲ လေးစားခြင်း၊ တစ်ခြားသူများမချိုးဖောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန် ရှိသည်။ မတရားဖိနှိပ်သည့်ဥပဒေများကင်းဝေးပြီး လူနည်းစုများအပါအ၀င် လူတိုင်း စိတ်ချလုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်အောင် အကြမ်းဖက်၊ စော်ကားခြင်းများမရှိခြင်းသည် လွတ်လပ်မှုရှိသောဘ၀ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်တွင် ပါဝင်သည့် အခွင့်အရေး (Rights) ဆိုသည်မှာ လူတိုင်းဘ၀ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်ကို တောင့်တနေရခြင်းမှ ကင်းဝေးခြင်း (Freedom from Want) ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဖြင့် နေထိုင်နိုင်မည့် လူမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရရှိပြီး ဖူလုံနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လူတိုင်း လူမှုဘ၀၊ ၀င်ငွေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဘ၀များကို ဖူလုံစွာရရှိသော ဘ၀ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ရင်းမြစ်များကို စနစ်တကျသုံးစွဲပြီး ပြည်သူလူထုဘ၀ ဖူလုံမြင့်မားတိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဖိနှိပ်သော ဥပဒေများကြောင့် ကျောင်းသားများအပါအ၀င် လယ်သမား များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူများ ဖမ်းဆီးခံနေရခြင်း၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ နေအိမ်စွန့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်စော်ကားမှုများ တိုးမြှင့်နေခြင်း၊ အမုန်းစကားများ၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် လူနည်းစုများ မလုံမခြုံခံစားနေရခြင်းတို့က လွတ်လပ်မှုအားနည်းနေကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်များကို လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍများတွင် လိုအပ်သလို စနစ်တကျသုံးစွဲမှု အားနည်းနေသည့်အတွက် လူထု၏ လူနေမှုဘ၀မှာ နိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ဆောင်ပုဒ်ကို အလေးအနက်ထားပြီး လူ့အခွင့်အရေးကို အမှန်တကယ် လေးစား၊ ကာကွယ်၊ မြှင့်တင်လိုသော အစိုးရအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ်ပါသည်။
(၁) ပြည်တွင်းစစ်များကို အမြန်ဆုံးရပ်စဲပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဒုက္ခသည်များ စိတ်ချလုံခြုံစွာနှင့် နေရပ် ပြန်နိုင်ရေးကို အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရန်၊
(၂) မတရားဖိနှိပ်သည့်ဥပဒေများကြောင့် အရေးယူထားရသော သူများ၊ တရားစွဲဆိုခံနေ ရသောသူများကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်များနှင့် မကိုက်ညီသော ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်၊ ဖျက်သိမ်းပေးရန်၊
(၃) အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ မူရင်းဌာနေလူမျိုးများအပါအ၀င် လူနည်းစုများအပေါ် စစ်မှန်စွာဖြင့် ကာကွယ်ပေးမည့် အထူးဥပဒေများကို လျင်မြန်စွာပြဌာန်းပြီး အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ရန်၊
(၄) လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ အပေါ် ၀င်ရောက်ကြိုးကိုင်စွက်ဖက်မှုများ ရပ်တံ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရန်၊
(၅) မြန်မာနိုင်ငံက ပဏာမ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ် များကို အမြန်ဆုံး အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာစာချုပ် (ICCPR)၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ် (ICESCR)၊ ညှင်းပမ်းနှိပ် စက်မှုဆိုင်ရာ ဆန့်ကျင်တားဆီးရေး စာချုပ် (CAT) နှင့် လူမျိုးရေး အခြေခံသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေးစာချုပ် (ICRED) တို့ကို အမြန်ဆုံး အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးရန်၊
(၆) တိုင်းပြည်၏ဘဏ္ဍာငွေများကို လူထုအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍများတွင် တိုးမြှင့်သုံးစွဲရန်၊
(၇) ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်းများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၈) လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ကျောင်းသင်ရိုးညွန်းတမ်းများမှ သင်ကြားခြင်း အပါအ၀င် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများအကြား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပညာပေးခြင်းကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ပေးရန်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ဦးအောင်မျိုးမင်း (09 448015306 – myominburma@gmail.com) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Statement : International Human Rights Day
Today, 10 Decmember 2015 is the 57th anniversary of the birth of Universal Declaration of Human Rights (UDHR) endorsed by the United Nations. UDHR, the very first Human Rights document precisely mentions basic inalienated rights of every human beings and everyone is entitled to the human rights without any discrimination and with dignity.
The theme of 2015 International Human Rights Day is, "Our Rights, our freedoms, Always!" and this corresponds to the human rights policies in the Universal Declaration of Human Rights. In order to enjoy genuine human rights, everyone needs balanced rights and freedom. Rights without freedom cannot be pronounced as human rights and freedom without rights will not yield lives with dignity.
Freedom means Freedom from Fear. In order be free from fear, everyone needs security and the state is responsible not to violate those rights of the citizens and to protect citizens from someone violating them; freedom that ensuresasociety including minorities without oppressive laws, violence and ill treatments.
The rights in this year theme is Freedom from Want; longing for the required environment for the development of every human being. This means everyone enjoys the rights with dignity and being secured. Everyone enjoys sufficient social life, income, education, healthcare and cultural life. Therefore, the state is responsible to systematically manage the resources of the country in order to improve the lives of the citizens.
Presently, because of the oppressive laws, farmers, workers, human rights activists including students have been arrested, citizens fleeing their homes because of armed conflicts, increasing abuses on women and children, minorities feeling insecure because of the spreading of hate speech and that shows the weaknesses in freedom. The living standard is still at the lower stage because of the vulnerability in systematic use of the state budget in healthcare, education and social security sectors.
It is strongly recommended to the state respecting, protecting and improving human rights to focus this year theme of the International Human Rights Day and to address the followings:
to cease civil wars and to coordinate with civil society in transparent manners the safe repatriation of internally displaced persons and refugees
to release those charged, detained and tried under oppressive laws without conditions, to evaluate the laws that are of no longer international standard and to amend or decriminalize them.
to enact and enforce special acts to protect women, children and ethnic minorities
to take prompt action against corruptions in order to have rule of laws
to ratify and sign international human rights treaties such as International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Convention Against Torture (CAT) and International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)
to increase the national budget for education, healthcare, and social security sectors
to effectively execute anti-poverty and anti-corruption projects
to include human rights education in school curriculum as well as education program for civil servants and the general public.
For more information, please contact: U Aung Myo Min, (09 448015306 – myominburma@gmail.com)